Bannaanbax looga soo hor jeedo qaadka Itoobiya oo Muqdisho ka dhacay | KEYDMEDIA ONLINE
Bannaanbax looga soo hor jeedo qaadka Itoobiya oo Muqdisho ka dhacay
Banaanbax looga soo hor jeedo qaadka laga keeno Itoobiya ayaa ka dhacay Magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya – Qaar ka mid ah ganacsatada yaryar ee qaadka ku iibiya hareeraha waddooyinka Caaasimadda ayaa cabasho xoog leh ka muujiyay qiimaha uu ugu yimaado jaadka laga keeno dalka Itoobiya waxayna dhigeen mudaharaad ay ku codsanayeen in guud ahaan dalka laga mamnuuco qaadka Itoobiya.
Ganacsatada dibad-baxa dhigayay oo u badnaa hooyooyin dan yar ah, ayaaa shaeegay in ku qasaareen iibinta qaadka Itoobiya, waxayna madaxda dalka ka codsadeen in wax laga qabto, halka ay xuseen in dad gaar ah lagu naas-nuujiyay soo dajinta jaadka Itoobiya, taas oo sababtay in qiimihiisa uu sare u kaco.
Keydmedia Online, waxa ay hore u baahisay in afar ruux oo ay ka mid yihiin Xasan Cabdullaahi Farmaajo, oo la dhashay Madaxweynaha waqtidu ka dhamaaday, Guddoomiye Ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir, Cali Cabdi Wardheere ‘Cali Yare’, iyo Wasiirkii hore ee Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Salaad ‘Oomaar’ uu u afduuban yahay qaadka Itoobiya.
Ilo xog ogaal ah ayaa xaqiijinaya in lacag gaareysay $80,000, oo canshuur loogu yeeray, ay maalin kasta ka soo xarooto qaadka ka yimaada Itoobiya, Wasaaradda Maaliyadda ayaa qaadata $40,000, halka Afarta shaqsi ay $40,000, kale ee soo hartay kala qeybsadaan.
Ma aha markii koobaad ee hooyooyinka iibiya qaadka ay cabashadooda soo bandhigaan, hayeeshe ma jirto cid dhag qalas u siisay.